अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न कडा माग, यस्तो छ आरोप Nepalpana - Nepal's Digital Online
काठमाडौं । जातीय विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय अलायन्सले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । नवराज विक हत्याकाण्डका दोषीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै अलायन्सले मन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अलायन्सको संयोजक डा. मित्र परियारले नेताहरु सत्ता, पद र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लिप्त भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा आज निर्दोष नवराज लगायत ६ जना युवाका परिवारले न्याय पाउन सकेनन् ।’
डा. परियारले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा आशावादी भएको बताए । अन्तरजातिय विवाहको आरोपमा अण्डकोष घोटी–घोटी भेरी नदीमा फालेको भन्दै राज्यले अपराधी जोगाएको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘जसलाई समाजले अपराधीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाइरहेको छ उसैलाई अर्थजस्तो जिम्मेवार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा दलितको अपमान गरेको महसुस भएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय नजरपनि यस घट्नामा परेको उनको भनाई थियो । परियारले भने,‘बन्दुक बोक्न र बिद्रोह गर्न आफूहरुलाई बाध्य बनाउन लागिएको छ ।’ उनले हतियार बोक्ने दिन नआओस् भन्दै देउवाजस्तो प्रजातन्त्रको लागि लडेका नेताले दलितको कुरा सुन्ने विश्वास गरे ।
उनले शर्माले हत्याराको पक्षमा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘जनार्दन शर्मा जस्ता अपराधीका कुख्यातले सत्ता र शक्तिकै दम्भ देखाएर हत्याराको संरक्षण गरिरहेका छन्,’ उनले भने । विवादित व्यक्तिलाई देउवा सरकारमा नियुक्त हुँदा दलित, शिल्पी समुदायले अपमान महसुस गरेको बताए । उनले नवराज बिक लगायतको जातिय हिंसाले अन्तराष्ट्रिय बेइज्जती भएको बताए । उनले सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दामा पीडित पक्षले न्याय नपाउने खतरा बढेर गएको समेत उल्लेख गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अलायन्सका अर्का संयोजक चन्देश्वर दासले दलित समुदाय तिरस्कृत मानिसको व्यक्तिगत दुस्मनीले नभएर धर्मको कारण भएको जिकिर गरे । उनले भने,‘जे जति सामाजिक घट्ना भएका छन्, ती सबै धार्मिक कारणले भएका छन् ।’ उनले माओवादीले आफ्ना सरकार आएपछि जातिय विभेद हट्ने भनेर जनतालाई झुक्याएको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘माओवादीले विभेद हटाउँछौ भनेर पछि आँफैले दमन गर्दै आएको छ ।’
देशमा हत्यारालाई पुरस्कृत गरिएको आरोप लगाउदै अहिले हत्याराको एउटा संरक्षक जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको उल्लेख गरे । उनले थपे,‘अब अर्का संरक्षक मातृका यादवपनि मन्त्री बन्दैछन् रे ।’ अब दलित र उत्पीडन वर्गले खुकुरी र बन्दुक पड्काउने साहस गर्नुपर्ने बताए । उनले जनार्दन विरुद्धमात्र नभएर आफूहरुले जनार्दनजस्ता धेरै जनाको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रिनुपर्ने टिप्पणी गरे । उनले धुनषाका शम्भु सदाको पनि प्रहरीले हत्या गरेको तर अहिलेसम्म उक्त घट्नामा पनि न्याय नपाएको स्मरण गराए ।
दलित–दलितबीच भएको खाडल मेटेमात्र आन्दोलन सफल हुने उनको भनाई थियो । उनले सामाजिक विभेद समाजको उन्नती र समृद्धिको बाधक भएको जिकिर गरिन् । जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाईएकोमा उनले आक्रोश पोखिन् । हत्या आरोपीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गरेको भन्दै उनले शर्मा अर्थमन्त्री बन्नु दुःखद् भएको सुनाईनन् । शर्मा पटक–पटक मन्त्री भैसकेको, १० वर्ष जनयुद्ध गरेको व्यक्तिले पनि रुकुम–पश्चिममा भएको नवराज विकलगायत ६ जना युवाहरुको निर्मम हत्या भएको जस्तो जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई उल्टै संरक्षण गरेको समेत आरोप लगाईन् । उनले वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले रुकुम नरसंहारको हत्याराहरुलाई कारवाही नगरेर संरक्षण गरेकोमा आपत्ति जनाईन् ।
श्रावण १५, २०७८ शुक्रवार ०८:४१:१५ बजे : प्रकाशित